माधव र योगेश बीच लफडा, एक आर्काको पोल खोलाखोल, खुल्यो एकाएक दुवैको काण्ड ! - Compaq News
माधव र योगेश बीच लफडा, एक आर्काको पोल खोलाखोल, खुल्यो एकाएक दुवैको काण्ड !
नारायणहिटी सङ्ग्रहालय प्रकरणमा सबैले आफूलाई झन् झन् पेल्न थालेपछि तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले माधव नेपालकै पोल खोलिदिएका छन् । योगेशले आफूले क्यान्टिन खोल्न निर्देशन दिएको स्विकार्दै नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको पोल खोलिदिएका हुन् ।
नारायणहिटी भित्र क्याफेटेरिया खोल्ने आवरणमा बेलुका १० बजेसम्म खोल्न पाउने अनि बङ्कर भित्र समेत रेस्टुरेन्ट चलाउने गरी भौतिक संरचना बनाएको खुलासापछि बताससँग समितिले गरेको सम्झौता विवादमा आयो।
नारायणहिटी परिसरमा बतासले अवैध संरचना बनाइरहेकोबारे सरकारी मुख पत्र गोरखापत्रले लेखेको थियो। त्यसपछि अन्य मिडियाले पनि फलो गरे।
योगेश अन्तर्वार्तामा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग रिसाए। अन्तर्वार्ताकार ऋषि धमलाले उनलाई अब कारबाही गर्ने रे भन्दै उनलाई उक्साइरहेका थिए।
उनले आफू काठ तस्करी गरेर राजनीतिमा नआएको भन्दै पर्यटनमन्त्री आले विदेशबाट आउँदाको अध्यागमनको भिभिआइपी कक्षको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न समेत माग गरे।